कालो शुक्रवार: उत्तम उपलब्ध मूल्यमा माल्टामा days दिन यात्रा समाचार
एक वर्ष, दिन कालो शुक्रबार यो यहाँ छ। यो सत्य हो कि हामीलाई जहिले पनि बुद्धिमानीपूर्वक किन्न भनिएको छ। तर सत्य यो हो कि यस वर्ष, हामी एक राम्रो यात्रा मा लगानी गर्न जाँदैछन्। एउटा जस्तो कि आज हामी प्रस्ताव गर्छौं र तपाईं पक्कै पनि इन्कार गर्न सक्नुहुन्न। बारेमा माल्टा मा चार दिन तपाईले सोचे भन्दा कमको लागि।
उही प्रस्ताव मा विमान टिकट र रहनुहोस्। सायद यो जानेर, उच्च तथ्या .्क र नम्बरहरू तपाईको टाउकोमा उड्न थाल्छन्। तपाईं देख्नुहुनेछ कसरी अन्त मा, तपाईं एक आश्चर्य प्राप्त। तपाईंले जतिसक्दो चाँडो आफ्नो रिजर्भेसन गर्नु पर्छ, तर तपाईं आफ्नो सुटकेस धेरै शान्तपूर्वक संगठित गर्न सक्नुहुन्छ किनकि हामी केहि महिनाको लागि बाहिर लिदैनौं। पत्ता लगाउनू!
1 कालो शुक्रवार, माल्टा मा चार रात उडान
2.1 भ्रमण गर्नका लागि आवश्यक शहरहरू
2.2 टापु र समुद्र तटहरू
2.3 माल्टाको मन्दिरहरू
कालो शुक्रवार, माल्टा मा चार रात उडान
त्यहाँ धेरै गन्तव्यहरू छन् जसले हामीलाई आकर्षित गर्दछ। हामीमध्ये कोही-कोहीले उनीहरूलाई धेरै चोटि भ्रमण गरेका छौं किनकि उनीहरूले हाम्रो मुखमा राम्रो स्वाद छोडेका छन् र अरु कोही छन् जसको बारेमा हामीले रिस उठेको सुन्छौं तर कदम चालेका छैनौं। त्यसोभए, आज हामी तपाईंलाई यो ठूलो प्रस्तावको साथ यो प्रस्ताव दिन चाहन्छौं। हामी जाँदै छौं माल्टा भ्रमण गर्नुहोस्!.
हामीसँग यस ठाउँको भ्रमण गर्न सक्षम हुन तीन दिन भन्दा बढि समय हुनेछ। उडान मायानिडबाट रानायर कम्पनीको साथ प्रस्थान गर्नेछ। तर हामीले घोषणा गरिसकेका छौं, यद्यपि प्रस्ताव अहिले आइसक्यो, यात्रा मे २०१२ को लागि निर्धारित गरिएको छ। यद्यपि यो टाढा लाग्न सक्छ, हामीलाई थाहा छ कि महिनाहरू चाँडै बितेर जान्छ। त्यसैले यो जान चोट छैन हाम्रो ब्ल्याक फ्राइडे रिजर्भेसन बनाउँदै। बुधवारदेखि आइतवारसम्म हामी गन्तव्यको यस मणिको ठूलो रहस्यहरू फेला पार्न सक्दछौं।
तपाईले अब अर्को तर्फ उडान र अर्कोतर्फ होटल बुक गर्नुपर्दैन किनकि हामी भन्छौं, प्रस्तावमा पुरानोको दुबै भागहरू समावेश छन्। होटेल 'स्लीमा चालेट' हो जुन यो समुद्री किनारको अगाडि अवस्थित छ। तपाई धेरै नजीकको हुनुहुन्छ, यातायातको साथ राम्रो कुराकानी र साथै पनि, ठाउँ एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रमाइलो क्षेत्र द्वारा घेरिएको छ, जहाँ तपाई दुबै पसल र बारहरू वा २०० मिटर टाढा शपिंग सेन्टर पाउनुहुनेछ। हामी के भन्न सक्दछौं जुन यस होटेल शहरको केन्द्रबाट ०.२ किलोमिटर मात्र छ। यदि तपाईंले पहिले नै निर्णय लिइसक्नु भएको छ भने, त्यसो भए तपाईंसँग यो प्रस्ताव आउँनेछ Lastminute.com.
भूमध्यसागरको बीचमा र इटालीको दक्षिणमा हामी माल्टालाई भेट्ने छौं। यो पर्यटकहरु को लागी एक लोकप्रिय गन्तव्य हो, तसर्थ, हामी यो प्रस्ताव को याद गर्न सक्दैनौं, सपना साकार बनाउन। म माल्टामा के हेर्न सक्छु? तिनीहरूको अन्त नहुने मुख्य बुँदाहरू हुन्छन्, हामी सबैमा महत्त्वपूर्ण कुरा उल्लेख गर्दछौं।
भ्रमण गर्नका लागि आवश्यक शहरहरू
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक हो 'La Valletta'। यो बारोक शहर हो, जसमा सुदृढीकरणका साथै ढु stone्गाका पर्खालहरूले हामीलाई समयमा फिर्ता लिन्छ। यसको पछाडि लामो परम्परा र इतिहास छ। केहि पत्ता लगाइनेछ जुन यसको दरबार वा चर्चहरूको लागि धन्यवाद हो। विचार गर्नुपर्ने अर्को शहर हो 'मोदिना', जो एक मध्यकालीन पर्खाल छ कि द्वारा पनि चुनिएको छ 'थ्रोन्सको खेल' तिनीहरूको परिदृश्यहरूको एक हिस्सा हुन। लगभग १ About किलोमिटर दक्षिणमा हामी 'मार्सक्लोक' फेला पार्दछौं।
यो क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माछा मार्ने पोर्ट हो। त्यहाँ तपाईले देख्नुहुनेछ कि काठका डु .्गाले कसरी उनीहरूको रंगहरूको लागि विशेष धन्यवाद दिन्छ। 'रबत' एउटा शहर हो जुन अरबले बनाएको हो, जहाँ तपाईं catacombs भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। जब हामी कुरा गर्छौं 'कोटोनरा' हामी यसलाई 'भिट्टोरियोसा', 'सेन्गलिया' र 'कोपिसकुवा' को भेलाबाट गर्छौं। जहाँ तपाईं तिनीहरूले लुकाउने ठूलो आकर्षण छुटाउन सक्नुहुन्न।
टापु र समुद्र तटहरू
माल्टाको समुद्री तटमा पैदल यात्रा सपना हो। भनिन्छ कि तिनीहरू भूमध्यसागरका महान रत्नहरू मध्ये एक हुन्, त्यसैले यो अर्को बिन्दुलाई ध्यानमा राख्नेछ। थप रूपमा, हामी भ्रमण गर्न सक्दछौं 'Gozo टापु'। यद्यपि यो माल्टा भन्दा सानो छ, यसमा स्मारकहरू र विभिन्न सुन्दरताका विभिन्न मन्दिरहरू छन्। अर्कोतर्फ, हामीसँग छ 'कोमिनो टापु' जुन धेरै सानो छ, तर शान्त र नमीली पानीहरूले तपाईंलाई मायामा पार्छ।
यस टापुको दक्षिणमा हामी तथाकथित 'हागार किम' भेट्टाउनेछौं जुन सब भन्दा पुरानो हो तर उत्तम अवस्थामा छ। हामी प्रागैतिहासिकको प्रकार र Tarxiem बिर्सन सक्दैनौं 'Hypogeum' त्यो भूमिगत हो र त्यो एक अभयारण्य भएको छ। हामी यो अविश्वसनीय ब्ल्याक फ्राइडे प्रस्तावका लागि यी सबै धन्यवादको मजा लिन सक्दछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » बोलपत्र » कालो शुक्रवार: उत्तम मूल्यमा माल्टामा days दिन